Kufsiga iyo soo galootiga | Somaliska
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ku doodaan xubnaha xisbiga SD ayaa ah in raga soo galootiga ah ay geystaan kufsiga ugu badan ee ka dhaca Sweden. Mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka ugu jira SD ayaa isbuucaan dood dhaliyay ka dib markii uu bogiisa ku qoray in raga soo galootiga ah ay masuul ka yihiin inta badan kufsiyada. Hadaba maxaa ka jira arintaas? Cilmi baarista ay sameeyaan Golaha ka hortaga dambiyada (Brottsförebyggande rådet - Brå) ayaa soo bandhigaysa sawirka SD mid ka duwan. Guud ahaan dambiyada ka dhaca Sweden ayaa waxaa geysta 80% dad Swedish dhalat ah. Qaasatan dambiyada Kufsiga 60% waxaa geysta rag swedish dhalat ah halka 40% ay geystaan soo galootiga. Balse tiradaas dambe ayaa qeylo dhaan dhalineysa maadaama dadka soo galootiga ah ay guud ahaan yihiin 14% shacabka Sweden. Hadaba mala dhihi karaa SD ayaa saxsan? jawaabtu waa maya maadaama iyagu ay doortaan in ay dambiyada oo dhan dusha ka saaran soo galootiga balse waxaa muhiim ah in soo galootigu dib isku fiiriyaan maadama 14% shacabka Sweden oo keliya ay soo galooti yihiin, in ay 40% dambiyada kufsiga masuul ka noqdaan waa tiro aad u badan. Soomaalidu intee lug ku leeyihiin kufsiyada? walow aysan jirin tiro dhab ah oo cadeyneysa haddii ay soomaalidu geystaan kufsi iyo in kale balse inta badan warbaahinta Sweden kuma soo baxdo soomaali kufsi lagu eedeeyay.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay ku doodaan xubnaha xisbiga SD ayaa ah in raga soo galootiga ah ay geystaan kufsiga ugu badan ee ka dhaca Sweden. Mid ka mid ah xubnaha baarlamaanka ugu jira SD ayaa isbuucaan dood dhaliyay ka dib markii uu bogiisa ku qoray in raga soo galootiga ah ay masuul ka yihiin inta badan kufsiyada.
Hadaba maxaa ka jira arintaas? Cilmi baarista ay sameeyaan Golaha ka hortaga dambiyada (Brottsförebyggande rådet – Brå) ayaa soo bandhigaysa sawirka SD mid ka duwan. Guud ahaan dambiyada ka dhaca Sweden ayaa waxaa geysta 80% dad Swedish dhalat ah. Qaasatan dambiyada Kufsiga 60% waxaa geysta rag swedish dhalat ah halka 40% ay geystaan soo galootiga. Balse tiradaas dambe ayaa qeylo dhaan dhalineysa maadaama dadka soo galootiga ah ay guud ahaan yihiin 14% shacabka Sweden.
Hadaba mala dhihi karaa SD ayaa saxsan? jawaabtu waa maya maadaama iyagu ay doortaan in ay dambiyada oo dhan dusha ka saaran soo galootiga balse waxaa muhiim ah in soo galootigu dib isku fiiriyaan maadama 14% shacabka Sweden oo keliya ay soo galooti yihiin, in ay 40% dambiyada kufsiga masuul ka noqdaan waa tiro aad u badan.
Soomaalidu intee lug ku leeyihiin kufsiyada? walow aysan jirin tiro dhab ah oo cadeyneysa haddii ay soomaalidu geystaan kufsi iyo in kale balse inta badan warbaahinta Sweden kuma soo baxdo soomaali kufsi lagu eedeeyay.
Sogaloti iyo kufsi mal ma isla gali karan nin kirada iyo cuntadisa labixinayo maxu sameynkara jawabtu wa waxba
waa wax laga argagaxo kufsiga
SOMALIDA SWEDEN JOOGTO 0.6% XATAA KAMA GAYSTAAN DANBIYADA KADHACO WADANKA MAXAAYEELAY WADANKAAN WAXAA KUNOOL QAWMIYADA BADAN TAN UGU NABDOONA WAXAALA DHIHI KARAA WAA SOMALIDA,MUGA SD,GA MEEL KALE AY NAGASOGALAN AYEEY LA,YIHIIN SIDA AY IILA MUUQATO ANIGA
su aasha is weydiinta mudan waxay tahay ajniga kuwa ugu badan ee wax kufsadaa wadankee ka yimaadeen?
waxaan u malynayaa in somalidu noqon doonto 0.1%…………………..
asc dhamaantina.waxaa jeclahaay ina fiigradeyda ku darsado anigo ka hadlayo run wadaankasto wuu le yahay dad fiican iyo dad xun lama wada edeyn karo envandarare sameyaay waa shaqsi qura lamana edeynkaro dado dhaan qofki qaldamay waa in la edeyo